Lunar စိုက်ပျိုးခြင်းပြက္ခဒိန် | အွန်လိုင်းလယ်သမားရဲ့စားကျက် | February 2020
အမျိုးအစား Lunar စိုက်ပျိုးခြင်းပြက္ခဒိန်
စက်တင်ဘာ 2019 မှာလပွက်ခဒိဥယျာဉ်မှူးနှင့် horticulturist
အတော်များများကဥယျာဉ်မှူးအပေါငျးတို့သလုပျငနျးက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ထွက်သယ်ဆောင်သောအတိုငျး, လပွက်ခဒိလိုက်နာပါ။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည်ပြက္ခဒိန်နှင့်အညီစက်တင်ဘာလ 2019 ခုနှစ်တွင်ကြဲခြင်းနှင့်၎င်း၏ features တချို့ကိုသိကြရနိုင်သောအရာကိုစဉ်းစားပါ။ ကွဲပြားဒီဂရီအတွက်လေယာဉ်ဆင်းသက်အပေါငျးတို့သကောငျးကငျအလောင်းတွေပေါ်လဆင့်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ကုန်းသက်ရှိတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ထိုဥယျာဉ်များနှင့်မီးဖိုချောင်ဥယျာဉ်တော်၌ကျင့်သောအကျင့်များစာရင်း, ဒီဇင်ဘာလ 2017 အတှကျလစိုက်ပျိုးခြင်းပြက္ခဒိန်
ဆောင်းရာသီတွင်, အပင်၎င်းတို့၏နွေရာသီအိမ်တွင်း, ကြွင်းသောအရာနှင့်အိပ်စက်ခြင်းတဲ့ကာလမှာ။ ဒါဟာသင်အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဟုမဆိုလိုပါ။ စောင့်ရှောက်မှုပိုးမွှားကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်, ဆီးနှင်းသူတို့နှင့်အတူဖုံးအုပ်ခြင်းဖြင့်အပင် wintering ယူရပါမည်။ မိုးလုံလေလုံအပင်နှင့်အတူဖန်လုံအိမ်, ဥယျာဉ်ထဲမှာအလုပ်ရှိပါသည်။ ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းတွင်ခုနှစ်တွင်ဒီဇင်ဘာလ၏အစအဦး၌အဘယ်သို့ပြုရမည်ပြက္ခဒိန်ဥယျာဉ်မှူး, စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဥယျာဉ်မှူး, ဒီဇင်ဘာလ 2017 အတွက်ပြက္ခဒိန်ဥယျာဉ်မှူးပြီးနောက်ဥယျာဉ်မှတဆင့်လမ်းလျှောက်ခြင်း, ကြံစည်မှုတစ်လျှောက် Compact ဆီးနှင်းခြံစည်းရိုး: ကသေးငယ်တဲ့ကြွက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 ဘို့ lunar စိုက်ပျိုးခြင်းပြက္ခဒိန်
စိုက်ပျိုး, အစားထိုး, အပိုင်းအစနှင့်အခြားဟော်ရီကာချာကုသမှုများအတွက်အချိန်ရွေးချယ်ခြင်း, ဥယျာဉ်မှူးမကြာခဏလပွက်ခဒိအာရုံစိုက်။ လ၏အဆင့်ကိုတကယ်စက်ရုံပြင်ပတွင််ရောက်စွက်ဖက်ရန်တုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပေါ်မှာအချို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလပြက္ခဒိန် 2019 ခုနှစ်တွင်ဥယျာဉ်မှူးနှင့်ဥယျာဉ်အလုပ်အတွက်အဆင်သင့်ရက်ပေါင်းတွင် - အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
Urals များအတွက် 2019 ခုနှစ် lunar ပြက္ခဒိန်ဥယျာဉ်မှူး
ရှေးခေတ်ကကတည်းကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အရေးကြီးသောအချိန်လေးဆင်နွှဲရန်, ကောငျးကငျအလောင်းများ၏ရွေ့လျားမှုများကိုအသုံးပြု: စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စပါးရိတ်ရာကာလအချိန်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည် 2019 ခုနှစ်အတွက် Urals ၏လစိုက်ပျိုးခြင်းပြက္ခဒိန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဥယျာဉ်မှူး၏ပိုင်ထိုက်သောအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာကိုအပင်အများစုမှာအပင်ကြီးထွားမှုအတွက်လအဆင့်များ၏သက်ရောက်မှုကိုပိုပြီးထက် 80% အားဖြင့်ရေပါဝင်ပါသည်, ဒါမွန်းဆွဲဆောင်မှုအဆိုပါရေလှောင်ကန်ထဲမှာရေတစ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုအဖြစ်သူတို့အပေါ်မှာကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။
2019 violets များအတွက် lunar ပြက္ခဒိန်
Saintpaulia အတော်လေးစက်ရုံဂရုစိုက်ဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ် - မှားအချိန်အစားထိုးယဉ်ကျေးမှုကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလပွက်ခဒိသငျသညျစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ပန်းပွင့်အိမ်ကစိုက်ပျိုးအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အများဆုံးကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲရက်ပေါင်းကိုရှေးခယျြကူညီပေးသည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် manipulate မှလိုက်တဲ့အခါအောက်ကကြည့်ပါ။ စက်ရုံ၏လအဆင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုကဘာလဲ?
နိုဝင်ဘာလ 2019 မှ lunar ပြက္ခဒိန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်
ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အရပ်ဌာနတာဇီဝဖြစ်စဉ်များအပေါ်လ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတွင်, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရှည်လျားလူသိများ, ငါတို့ဘိုးဘေးထားပြီး, ဒီဖြစ်စဉ်များ၏အမြစ်အကြောင်းတရားများ၏အဆုံးသည်အထိသဘောပေါက်ဘဲ, စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အမျိုးမျိုးထဲကတင်ဆောင်လာသောအပါအဝင်, သင့်အားသာချက်ကသုံးစွဲဖို့သင်ယူပါပွီ။ lunar ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အတက်ရေးဆွဲပြက္ခဒိန်များ, မသာလယ်သမားသို့မဟုတ်အိမ်တွင်းမှအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မိုးလုံလေလုံအပင်ပရိတ်သတ်တွေ။
မတ်လ 2019 မှာလပွက်ခဒိဥယျာဉ်မှူးနှင့် horticulturist
မြေကြီးတပြင်ဖြစ်စဉ်များအပေါ်လအဆင့်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်သက်သေပြနေသည်ကြောင့်များစွာသောဥယျာဉ်မှူးနက္ခတ်ဗေဒင်၏အမြင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောသီးနှံစိုက်ပျိုးမှု၏ကိစ္စရပ်များအတွက်နားထောင်ရန်ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းတစ်ခုတည်းတစ်လမှာတော့ဤဖြစ်စဉ်ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ချဉ်ကြော်ပြက္ခဒိန်၏ထောက်ခံချက်နှစ်တွင်တစ်လျှောက်လုံးအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
2019 ခုနှစ်တွင် lunar ပြက္ခဒိန်စိုက်ပျိုးခြင်းခရမ်းချဉ်သီး
လက်ရှိကာလ၌အစပြုလျက်, မွန်း၏တည်နေရာအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကိုမှနှစ်ဦးစလုံးခရမ်းချဉ်သီးပျိုးပင်လစာအာရုံစူးစိုက်မှုမျိုးစေ့ကိုကြဲနေစဉ်အတွင်းတချို့ကလယ်သမား။ သက်ရှိအပေါ်ကမ္ဘာရဲ့ဂြိုဟ်တုများ၏သက်ရောက်မှုများ, အခြားအမှုအရာတို့တွင်အ, အပင်များပေါ်တွင်သိပ္ပံပညာရှင်များအတည်ပြု - ဤအရပ်, ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုချဉ်းကပ်တရားမျှတဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးစိုက်ပျိုးခြင်းဆောင်းပါးအတွက်နောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေး lunar ပြက္ခဒိန်၏ 2019 ခုနှစ်ခရမ်းချဉ်သီးစတငျရ။
တောင်မှကျနော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်ကောင်းကင်အလောင်းတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်သီးနှံများ၏အထွက်နှုန်းကိုထိခိုက်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ထို့ကြောင့်အပင် tenements နှင့်အတူယနေ့ဥယျာဉ်မှူးအများအပြားကိုလိုက်နာဖို့ကြိုးစားနေသော lunar ပြက္ခဒိန်, မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါး၌သငျသညျ 2019 အတွက်ပြက္ခဒိန်အတွက်ငရုတ်ကောင်းစိုက်ပျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ 10 ဖေဖော်ဝါရီလ 15 ရက်ကနေထွက်သယ်ဆောင်ငရုတ်ကောင်း၏ပျိုးပင်စိုက်ပျိုး, ပုံမှန်အားဖြင့် 2019. အတွက်ပြက္ခဒိန်၏ငရုတ်ကောင်းပျိုးပင်စိုက်ပျိုး၏ရက်စွဲများ။
ဇန်နဝါရီလ 2019 ခုနှစ်များအတွက် lunar စိုက်ပျိုးခြင်းပြက္ခဒိန်
လပြက္ခဒိန်အဆိုအရထိုသူတို့အဘို့အပင်များနှင့်စောင့်ရှောက်မှုကြီးထွားလာအကောင့်သို့အသီးအရွက်များကြီးထွားအပေါ်ကမ္ဘာမြေရဲ့ဂြိုဟ်တုများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြာပေးသော biodynamic စိုက်ပျိုးရေး, ဟုခေါ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဇန်နဝါရီ 2019 ဖို့လပွက်ခဒိအပေါ်အလေးပေး - ကစိုက်ပျိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထိုသူတို့အဘို့ဂရုစိုက်ဖို့အလုပ်အဆိုပြုထားသည့်ရက်စွဲအဘို့အကောင်းနဲ့အဆိုးရက်ပေါင်းပြသထားတယ်။
အားလုံး hibiscus ဥယျာဉ်ကို hibernate ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကို: ဥယျာဉ်တော်၌ဓာတ်ပုံများ, ချမ်းဘို့ပြင်ဆင်နေနှင့်အပင်များအတွက်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့
ဘယ်လိုခြံစည်းရိုး၏အခြေခံအုတ်မြစ်များအတွက် formwork တည်ဆောက်ရန်